Funda i-origami kunye ne-origami ngezixhobo ezifanelekileyo-i-Ikkaro
yokuqalisa >> Imvelaphi kunye nemvelaphi
Imvelaphi kunye nemvelaphi
I-Origami… iinqwelomoya zephepha kunye namanani amaninzi angenakwenzeka.
Ukusukela kumncinci bendinomdla kwi-origami okanye kubugcisa be-Origami. Ndikhumbula indlela endazenzela ngayo iinqwelomoya zam amaphepha, amaphenyane kunye namatanki emikhosi yam. Njengomntwana ndandiyithanda.
Kodwa asithethi nje ngemicimbi entsonkothileyo. Sifuna ukubonisa ukuba i-origami inokuba lula kakhulu kwaye ilungele abantwana abancinci endlwini. Ukukhangela i-origami yabantwana? Ndilungiselela icandelo ukuze abantwana bakho benze amanani ngamanyathelo ngenyathelo.
Iiplanethi zephepha, izikhephe kunye nezilwanyana phakathi kwabanye abaninzi.
Ndiyacinga iinqwelomoya zephepha Kuya kufuneka, kunye neqhina lesaphetha, enye yeyokuqala ukuba ayingowokuqala ukudibana naye nawuphi na umntu onemvelaphi. Ukuba unomdla, ungenza inqwaba yeentlobo zeenqwelo moya, kwaye ubothuse abantwana xa bekucela ukuba wenze enye. Ndiqale ngeenqwelo moya kwaye ndenze iindidi ezininzi zeenqwelo moya zephepha.
Obunye ubuthathaka bam, nangona kungasetyenzwanga kangako, zizilwanyana zamaphepha.
Njengesiqhelo, iindawo ezininzi zivulekile ukuphanda kunye nokufunda. Ulwazi oluninzi lokukubonisa kwibhlog kwaye uyonwabele njengam.
El UWashi ukwabizwa ngokuba liphepha laseJapan, iphepha laseJapan okanye iWagami, liphepha eliqhelekileyo elivela eJapan. Lelona phepha lisemgangathweni ophezulu kakhulu kwaye eJapan lisetyenziswa kwizinto ezininzi. Ifumaneka kuzo zonke iintlobo zeemveliso, iambrela, ubucwebe, amalungu egrafu, iilokhwe zomtshato, iimaski ngokuchasene necoronavirus, njl. Luhlobo lwephepha elikuyo yonke indawo eJapan.
Namhlanje unokufumana i-washi eyenziwe ngesandla kunye nomatshini owenziwe ngewashi. Kodwa Inkqubo yokwenza i-washi yobugcisa ibililifa lenkcubeko elingabonakaliyo le-Unesco ukusukela ngowama-2014 ukwamkelwa kwepapercraft kwiindawo ezintathu: iHamada (iShimane Prefecture), iMino (iGifu Prefecture) kunye neOgawa / Higashi-chichibu (Saitama Prefecture). Oku kukwahlula kwiindlela zemveli zokuvelisa.
Iphepha elihle kakhulu, elinganyangekiyo nelimenyezelayo elingatyheli ngokuhamba kwexesha. Ngobunzima be-5 ukuya kwi-80 g / m2
Uya kulithanda inqaku lethu iphepha eliphinde lasetyenziswa kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto indlela yokwenza iphepha lobugcisa.
Ukuba ujonge i ikhalenda yedesika yakho ka-2018, intle kwaye inexabiso eliphantsi kwaye kulula ukuyakha akukho nto injengale templates inokuprintwa yokwenza iidodecahedron. Njengoko sele ucinga, kukho i-12 yobuso be-polygon eqhelekileyo, enye kwinyanga nganye :) Ngemihla yakhe sithethe ngayo kwikhalenda engapheliyo, lolunye ukhetho olulungileyo lokuvelisa kakuhle ngomthi, iphepha okanye ikhadibhodi.
Iitemplate zeendibano kwinqaku zenziwe ngoku kulandelayo sixhobo se intanethi, inomdla kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Imalunga ne- Umvelisi wekhalenda yedodecahedron.
Ilula kakhulu. Ukhetha phakathi kwezi ndidi zimbini zedodecahedra ayibonisayo, unyaka wekhalenda, ulwimi, ukuba ufuna inombolo yeveki ivele okanye hayi kunye nefomathi eyenzayo, enokuba yiPDF okanye iposti kunye nokukhuphela.
Uyenza njani i-Star Wars snowflakes
Le Krisimesi iza kwahluka, ndinayo icace gca. Umhombiso weKrisimesi ekhaya ngowam. ... Qhubeka nokufunda
Ku abathandi be-origami okanye i-Origami sizisa iinkqubo ezi-3 zasimahla ezithi xa uziqhelanisa kancinci zikuse kwelinye inqanaba ... into enje Imvelaphi yeJedi
Umvundla odlulileyo sisampulu yento enokufezekiswa.
Uyenza njani i-glider yephepha
Okunye moya ngaphezulu kwengqokelela yenqwelomoya yenqwelomoya esiyenzayo.
Ilula iglider eyenziwe ngephepha.
Uyenza njani ipinwheel yephepha
Isisiseko kwaye ithe ngqo, kodwa ndicinga ukuba i-origami okanye i-origami kufuneka uthande ukwenza ipowwheel.
Lo mfanekiso uyishwankathela ngokwenene,
Umfanekiso othathwe kwi Ihlabathi lePaliku
Indlela yokwenza unonkala wephepha
Kube lixesha elide ukusukela oko sasinomsebenzi we-origami, ke namhlanje sikulethela indlela yokwenza unonkala wephepha. Sifumana ikakhulu iintlobo ezimbini zeemodeli zononkala. Khetha eyona uyithandayo. Ndishiya iividiyo ezininzi nganye
UHLAZIYO. Ndizitshintshile iividiyo zoqobo endizithumele ngo-2010. Kukho iividiyo ezininzi ngakumbi kwaye ezingcono namhlanje, kwaye zihambelana neentlobo ezahlukeneyo zoononkala bephepha. Ngoko ndiye ndahlaziya inqaku ngeembalwa endizithandileyo. Zonwabele
Kodwa ndiyakuxwayisa ukuba inqanaba lalomsebenzi liphakathi-liphezulu, ke musa ukuphelelwa lithemba ;-) Kwiividiyo unokufumana inyathelo eneenkcukacha ngenyathelo kwimodeli yalo. Ukuba umoshe okanye awunalo inyathelo elicacileyo, ungayimisa ividiyo. Kuluncedo olukhulu.
Uyenza njani ihelikopta yasekhaya
Engaphezulu kwe Ihelikopta ndicinga ukuba yiphepha le-autogyro. Kodwa ndandonwabile. Singatsho ukuba isekwe kwimbewu yeemaphu, kodwa sele ingumbono wam.
Ingxelo entsha yeGuinness yexesha lokubaleka kwenqwelomoya yephepha
Ungeniso luhlaziyiwe ukuya kwi-27-11-2017 ndongeza iirekhodi ezintsha ezifezekisiweyo kubhabha lweenqwelo moya zephepha kule minyaka. Ingxelo ... Qhubeka nokufunda
Iphepha1 Iphepha2 Elandelayo →